रेड मर्करी के हो ? कसरी फैलियो यसबारे अफवाह ? - South Asia Check
South Asia Check / आइतबार, कार्तिक ९, २०७७
केही दिनयता फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पुरानो टिभी र रेडियोमा रेड मर्करी भनिने पदार्थ पाइने र त्यो विक्री गरेमा ठूलो रकम हात पर्ने दाबी सहितका पोष्ट शेयर गरिएका छन् ।
“पुरानो टिभी रेडियोमा रेड मर्करी हुन्छ जुन एक ग्रामको करोडौँ रुपैयाँ आउँछ । युट्युबमा हेर्नुहोला,” मयुर श्रेष्ठ नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताकाे स्टाटस छ । अन्यले राताे झोल पदार्थ भएको एउटा सानो सिलिण्डरको तस्बिरसहित सो सामग्री भए सम्पर्क गर्न भनेका छन् ।
नेपालमा ‘नेपाली पुरानो पैसा’ नामक ५७ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुक ग्रुपमा यसबारे चर्चा गरिएको छ । पुराना सिक्का र नोटबारे पोष्ट शेयर गरिने उक्त फेसबुक ग्रुपमा रेड मर्करी भन्दै सानो बोतलमा रातो झोल भएको तस्बिर शेयर गरिएको छ । विभिन्न प्रयोगकर्ताले आफुसँग त्यो भएको वा किन्न इच्छुक भएको बताएका छन् ।